Fahafahana ho an'ny Stocks UE ho an'ny varotra ao amin'ny UK post Brexit
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fahafahana ho an'ny Stocks UE ho an'ny varotra ao amin'ny UK post Brexit
Ny manampahefana momba ny fiarovana sy tsena eropeana (ESMA) dia nametraka fanitsiana “Mizara adidy ara-barotra” (STO) fa ny mpampiasa ny tsenam-bola dia tsy maintsy miady varotra voatanisa ao amin'ny EU manomboka amin'ny volana Janoary raha nanapa-kevitra ny tsy hamela ny fidiran'i Londres amin'ny varotra fizarana i Brussels. Ny drafitra nohavaozina momba ny adidy amin'ny varotra (STO) dia manome fototra matanjaka an'ireo vondrom-piarahamonina liana hampiseho ny haavon'ny fahatokisany azy ireo ary handroso amin'ny Internet hanaraka ny aingam-panahy mahasoa ary hifanaraka tsara amin'ny haavon'ny tombontsoa manokana hirosoana amin'izany. Miova haingana ny toe-karena ary miteraka vintana ho an'ireo mpampiasa vola vaovao amin'ny fomba hananany ny tanjaka sy ny fahaizany amin'ny fanatanterahana ny fitakian'ny vahoaka amin'ny anaran'ny drafitra fampahalalana marobe. Saika ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny zava-misy mahasoa sy ny tarehimarika ary ny tsena fironana. The mpampindram-bola amin'ny UK indrindra ary ny tsenan'ny EU dia manana fotoana sy hevitra betsaka ho an'ny mpampiasa vola mampiasa vola amin'ny stock isan-karazany ary hahitana tsena vaovao aorian'ny fandalinana lehibe.
Noho ny fanavaozana maro sy ny paikady mahasoa, drafitra fandraharahana manasongadina sy mahaliana maro no azo tanterahina amin'ny safidy tsara. Ny fahafaha-mampiasa vola vaovao dia azo jerena amin'ny safidy tsara ary hahafahan'ireo mpampiasa vola manao drafitra fampiasam-bola azo antoka sy azo antoka. Ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny zava-misy sy tarehimarika ary hanomezana ny haavon'ny fahatokisana tsara indrindra amin'ny alàlan'ny drafitra fandraisana andraikitra eo noho eo ary hahatratrarana ny fandrosoana amin'ny drafitra fisainana hendry.
Ny fahafaha-manao fampanjariam-bola vaovao manaitaitra ho an'ny Indostrialy avo lenta ao London & Essex dia mety ho fanapahan-kevitra tsara hahazoana vola amin'ny tsena isan-karazany. Ho an'i London sy Essex manokana, misy ny fotoana sy drafitra azo tanterahina ary manana fahaiza-manao mety mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny olona.
Ny fanolorana fifanakalozana varotra amin'ny zara Eoropeana dia mety ho safidy tsara hampiasana ny drafitra endri-javatra tsara indrindra sy hahazoana aingam-panahy hanome ny hevitra tsara indrindra amin'ny anaran'ny drafitra fampisehoana marobe. Ny mpivarotra dia mandinika hatrany ny fironana marina amin'ny tsena sy ny fandinihana tsara ny fironan'ny mpanjifa hankafy ny fizahana miavaka amin'ny anaran'ny loharanon-karena tena izy.
Ankehitriny ny vondron'orinasa dia afaka mivarotra amin'ny toerana fivarotana any UK aorian'ny Brexit raha amidy amin'ny pounds sterling mba hidirana amin'ny tsena mety tsara indrindra. Miorina amin'ny foto-kevitra mahasoa ny zava-drehetra ary manana potika lehibe hifanaraka amin'ny ambaratonga mahaliana ny olona sy hanome ny valiny tsara indrindra amin'ny anaran'ny drafitra fampitaovana marobe.